श्रीमानलाई कलेजो दान, प्रत्यारोपण सफल | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार श्रीमानलाई कलेजो दान, प्रत्यारोपण सफल
श्रीमानलाई कलेजो दान, प्रत्यारोपण सफल
२०७८, ३१ असार बिहीबार १३:५३
चितवन मेडिकल कलजले दोस्रोपटक कलेजो प्रत्यारोपण गरेको छ । असार १८ गते सफलता पूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको कलेजले आज(विहिबार) पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिएको छ । कलेजो रोगबाट पीडित भएका जाजरकोट स्थित कुशेगाउँपालिका वडा नम्बर ९ का ४७ बर्षिय भरतबिक्रम शाहीको कलेजोको प्रत्यारोपण गरिएको हो । उनलाई श्रीमती कमलादेवी शाहीले कलेजो प्रदान गरेकी हून् । ६० प्रतिशत कलेजो काटेर श्रीमानको शरीरमा प्रत्यारोपण गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । कलेजो प्रत्यारोपण गर्नका लागि सर्जन डा. सञ्जय कुमार यादवको टोलीलाई १५ घण्टा लागेको थियो ।
यादवको टोलीमा डा. एकानन्द सिंह, डा. जयन्त कुमार शाह, हेपाटोलोजी डा.सागर पौडेल, डा. बरुण श्रेष्ठ, डा. किरण अधिकारी, डा. नविन यादव, डा. सुरेश गौतम, डा. विरेन्द्र राउत रेडियोलोजिष्ट डा. दिपक अधिकारी डा. सुवास ओझा स्टाफ नर्स कमला क्षेत्री लगायतको टिम थियो । प्रत्यारोपणमा भारतबाट चिकित्सकहरु डा. निरभ गोयलको टिम समेत संलग्नता रहेको मेडिकल कलेजले जानकारी दिएको छ ।
उनकी श्रीमतीको स्वास्थ्यमा सुधार पछि उनलाई असार २७ गते नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । बिरामी भरतबिक्रम शाहीको अवस्था राम्रो हुँदै गैरहेको चिकित्सक डा. सञजय कुमार यादवले जानकारी दिए । अहिलेकै गतिमा सुधार भए आगामी साता उहाँलाई समेत डिस्चार्ज गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
२ देखि ३ महिनामा दुबै जनामा कलेजोको अवस्थामा बृद्धि भएर ९० देखि ९५ प्रतिशत पलाएर आउँछ । दुबै जनाले सामान्य जीवन विताउन सक्नेछन् । प्रत्यारोपण गर्दा डोनरको न्यूनतम ३० प्रतिशत कलेजो छोड्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाण्डौंमा कलेजोको जाँच तथा उपचार गराउँदै आएका शाही २ साता अघि चितवन मेडिकल कलेज आएका थिए । सिरोसिस् अफ लिभरको ‘ए’ ‘बी’ ‘सी’ स्टेज मध्ये शाही ‘सी’ चरणमा पुगेका थिए । गत फागुनमा ‘सी’ चरणमा पुगेका शाहीलाई प्रत्यारोपण नगराएको भए थप जीवन रहन मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । ‘उनको पेटमा पानी भरिएको र ठूलो थियो । अल्कोहलका कारण कलेजो बिग्रीएको त थियो नै, हेपाटाइटिस ‘बी’ पनि शाहीमा थियो ।’–मेडिकल कलेजका सिओ प्रताप देवकोटाले भने । प्रत्यारोपणका क्रममा झण्डैं १३ यूनिट रगत खर्च भएको थियो । उपचारमा अहिलेसम्म करिव ३० लाख रुपैयाँ खर्च लागेको उनका परिवारले जानकारी दिएका छन् । अस्पतालमा प्रत्यारोपण खर्च मात्र १५ लाख रुपैयाँ लागेको थियो ।
Previous articleगलकोटमा ‘भैँसी पकेट’
Next article‘अकबरी सुन गोविन पुन’